A.K.N CONSTRUCTION GROUP: November 2011
ကွန်ပျူတာထဲမှာ၇ှိထားသင့်တဲ့ Player ကောင်းလေးတစ်ခုပါ
မရှိဘူးဆိုရင်ထည့်ထားသင့်ပါပြီWindow Media Player က format အကုန်ဖွင့်မရပါ
ဘူးဥပမာ Mp4 FLv 3GP ဆိုရင်မပွင့်တော့ဘူး Media Player Classic ကတော့
ကောင်းလေးပါFlash Song တွေကိုလည်းဖွင့်လို့ ရပါတယ် ကဲ.....ဆွဲသာဆွဲ....။။
ဒီမှာDownload ယူပါ Media Player Classic
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:01 AM No comments:
ကွန်ပျူတာမှာသီချင်းစုံဖွင်ုလို့ ရအောင် VLC Player ကိုဆောင်
ရအောင်ပေါ့ Media Player Classic လောက်တော့မကောင်းဘူးဗျစုံချင်ရင်
ဒီမှာDownload ယူပါ VLC Media Player zwmnna.com
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:00 AM No comments:
GOM Player လေးလည်းသီချင်းတွေ Video တွေဖွင့်ဖို့ ကောင်းတာပဲ
ရင်ယူထားကြနောမဆိုးဘူး Media Player Classic လောက်တော့မမိုက်ဘူး..
ဒီမှာDownloadယူလိုက်ပါ GOM Media Player
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 8:55 AM No comments:
ကွန်ပျူတာမှာရှိထားသင့်တဲ့Finalmedia Player 2011
ဘာရယ်မဟုတ်ပြဿနာလေးတစ်ခုတွေ့ တာနဲ့ ဒီပလေယာလေးနဲ့ ဖြေရှင်းတာအ
ဒေါင်းလုပ်ယူထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖွင့်မရလို့ တဲ့Mediaplayer classic နဲ့ ဆိုအဆင်ပြေ
မယ်ထင်တာမရဘူးRealplayerကလည်းဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတာနဲ့ လုပ်မရဒါနဲ့ ဒီ
Playerလေးဒေါင်းလိုက်တာကွက်တိပဲ Flash သီချင်းတွေတော့ဖွင့်မရပြန်ဘူး FlV
တွေတော့ရတယ်Youtube ကဒေါင်းတဲ့သီချင်းတွေကFlv တွေဆိုတော့ဒီပလေ
3GP - Mobile Video
DIVX - DivX MPEG-4 Video
M4V - iTunes Video
MOV - Apple QuickTime Movie
MP4 - MPEG-4 Video
OGM - Ogg Media
RM - Real Media
VOB - Video Object (DVD)
ဒီမှာဒေါင်းလုပ်ယူပါ. Final Media Player 2011 Version
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 8:54 AM No comments:
ဒီမှာDownload ယူပါ Swisx Max4Portable @zwmnna.com
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 8:44 AM No comments:
Labels: flash song
Flash Song သီချင်းလေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့Max3 Portable
ဒီမှာDownload ယူပါ Swisx Max3Portable @zwmnna.com
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 8:43 AM No comments:
Flash Song ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်
Flashsongလေးတွေလုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ အတိုင်းထက်အ
ပေးကြည့်လိုက်ပါသီချင်း၁၀ပုဒ်လောက်ရောက်သွားတာနဲ့ အဆင်ပြေပီလို့ မှတ်လိုက်
ရင်းကျနော်သိထားတာလေးတွေပြန်မျှဝေပါတယ်. Flash သီချင်းလုပ်ဖို့ ဆော့ဝဲနဲ့ 
ဒါကတော့ကဗျာလေးတွေနဲ့ဆုံးအောင်နားထောင်ကြည့်
ဒီမှာDownload ယူပါ Flash song ဆော့ဝဲSwish Max2 Portable
ဒီမှာDownload ယူပါ Flash songလုပ်နည်းစာအုပ်
မြန်မာကလူတွေကဒီကယူပါ ဆော့ဝဲနဲ့ လုပ်နည်းစာအုပ် @zwmnna.com
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 8:41 AM No comments:
Flash Song လုပ်ချင်ရင်ဒီဆော့ဝဲလည်းလိုသေးတယ်နော်
MP3/MP4ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ ရ တဲ့ ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်သုံးကြည့်တာတော်တော်လေး
တွက်လည်းMP3 size ပြောင်းလို ရပါတယ်သာမာန်အားဖြင်MP3သီ
ချင်းတစ်ပုဒ်မှာ4MB ရှိတယ်နောflash song လုပ်တဲ့အခါမှာပုံတွေစာ
တန်းတွေထည့်ရင် Memory ပိုပြီးကြီးလာပါတယ်အင်တာနက်မှာ5MB
ကျော်ရင်တင်လို့ ခက်တတ်ပါတယ်အင်တာနက်ချစ်သူတို့ ချော့ကလက်
မြို့ တော်တို့ နောက်မြန်မာချစ်သူစတဲ့ Naing website တွေမှာလည်း
သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏ၇ှိနေလေတော့Memory နဲ့ လေuploadတင်
မကြာတော့ဘူးပေါ့ဒါကတော့Flash Song လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်
အင်တာနက်ကဒေါင်းလုပ်ယူထားတဲ့ဖိုင်တွေဟာFlash ဖိုင်တွေမလို့ 
အောက်စက်မှာပြန်ဖွင်ဖို့ အခွေနဲ့ ကူးမယ်ဆိုရင်အောက်စက်ကလက်
ခံတဲ့ File type တစ်ခုခုပြောင်းပေးရပါမယ်သူငယ်ချင်းတချို့ ကပြော
File Type မပြောင်းပေးလို့ ပါ အခွေထုတ်ချင်ရင်တော့ MPEG ကို
ပြောင်းပြီးမှထုတ်ကြဖို့ ဗဟုသုတပြောပြတာပါ ဒီဆော့ဝဲကFile Type
မျိုးစုံပြောင်းလို့ ရပါတယ်တစ်ခုထဲနဲ့ အစုံပါတာပေါ့ဟိုးအရင်ကျနော်
သုံးတတ်ခါစက ImToo တို့Xilisoft တို့ က တစ်မျိုးပဲရတာ VCD to
Mp3 အခုဆော့ဝဲကအကုန်ရတာ MP3 Mp4 3GP MPEG1 MPEG2
All to.. ဆိုတော့ကြိုက်တာလာခဲ့အလိုရှိတာပြောင်းပေးရုံပါပဲနောက်
ဖုန်းတို့ MP3 Player တို့ MP4 Player တို့ ထဲထည့်ချင်တဲ့သူတွေအ
တွက်ပါကျနော့သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ VCD အခွေဲထဲကသီချင်းကိုဖုန်း
တဲ့File Type အမျိုးစားပြောင်းပေးရုံပါပဲလို့ ရုပ်မပါချင်တော့ရင်တော့
VCD ကနေ MP3 ပြောင်းလိုက် ရုပ်လေးပါကြည့်ချင်ရင်တော့MP4ကို
ပြောင်းလို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ် နောက်ထပ်ဗဟုသုတကတော့ဖုန်း
တိုင်းMP4 ကိုမဖတ်ပါဘူး တရုပ်ဖုန်းတွေပေါ့သေချာတာကတော့3gp
3gp ကMP4 လောက်ရုပ်သံQuality မကောင်းတာကိုတော့သတိရပေါ့
ဆော့ဝဲကတော့ဒီမှာ...MP3MP4 ပြောင်းတဲ့ FFTဆော့ဝဲ
အလကားပေးတဲ့ဆော့ဝဲတွေပါ serie key ,Crack ဘာမှမလိုပါဘူး
စဉ်းစားမှုမပါဘဲ သင်ယူသော ပညာသည် အချည်းနှီးဖြစ်၍ ၊ ပညာမရှိဘဲ စဉ်းစားခြင်းကား
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 8:40 AM No comments:
နိုဝင်ဘာမိုး တောင်းပန်တယ် ပြန်ဆုံနိုင်ဦးမလား အသေချာဆုံး မင်းမရှိတဲ့Valentine ရာနှုန်းပြည့် နင်ရှိမှပြည့်စုံမယ် မင်းတယောက်ကိုပဲ
ဘယ်သူ့အတွက်လဲ(ထက်ယံ) မမ နတ်သမီးလေး ခိုနားရာ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမှီ အဝေးရောက်နေသော်လည်း ပြန်မဆုံဖြစ်ကြရင် တကယ့်ပုံပြင် ဟန်ထွန်း =လွမ်းသူအကြောင်း ဖက်ထားးမယ် Angel နတ်သမီး သူငယ်ချင်းအချစ် ကမ္ဘာငယ် ရင်ဘတ်ထဲကလူ အဝေးကချစ်သူ ငါမင်းအတွက် FavoriteGirl ငါဝအောင်ငိုမယ် ငရုပ်သီး မင်းပြန်လာမဲ့ရက် SomebodyToLove ဖွဲမီး ကောင်းကင်မေမေ NEVER BE REPLACED အချစ်တန်ခိုး(အာဇာနည်) I.M.fd RIGHT HERE WAITING FOR YOU YMBG GROUP ချစ်တယ် မင်းနဲ့အတူတူ မဆုံနိုင်ခြင်း(ညီမှူးအိမ်) တစ်ကယ့်ပုံပြင်-ရိုးရာ မိုး-ရိုးရာ မျက်နာ လပ္ပပ်ါပဲါကဆံင်(မွန်သီချင်း) ပူစူး=တစ်မိုးအောက် ကြိုးကြာ=တိတ်တိတ်လေး ဘယ်သူ့အတွက်လဲ မေ့လို့မရသေးဘူး ဒို့နှစ်ယောက် မဝေးတဲ့ချစ်ခြင်း(Nကိုင်ရာ) ငါဝအောင်ငိုမယ်၂ နင်မေ့လို့ရပြီလား ၁၆နှစ်အချစ် မေ့လိုက်
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 8:37 AM No comments: